Nyika yakanga isati yakundwa (1-7)
Kugovewa kwenyika iri kumabvazuva kwaJodhani (8-14)
Nhaka yaRubheni (15-23)
Nhaka yaGadhi (24-28)
Nhaka yaManase kumabvazuva (29-32)
Jehovha ndiye nhaka yevaRevhi (33)
13 Joshua akanga akwegura, ava nemakore mazhinji.+ Saka Jehovha akati kwaari: “Iwe wakwegura uye wava nemakore mazhinji; asi pachiine nyika yakakura chaizvo inofanira kutorwa.* 2 Iyi ndiyo nyika yasara:+ nzvimbo dzese dzevaFiristiya nedzevaGeshuri vese+ 3 (kubva kuna Shihori* kumabvazuva kweIjipiti* zvichikwira kusvikira kumuganhu weEkroni kuchamhembe, yaimbonzi ndeyevaKenani)+ kusanganisira iya yemadzishe mashanu evaFiristiya+ kureva vaGaza, vaAshdhodhi,+ vaAshkeroni,+ vaGati+ nevaEkroni;+ nyika yevaAvhimu+ 4 kumaodzanyemba; nyika yese yevaKenani; Meyara yevaSidhoni,+ kusvika kuAfeki, kumuganhu wevaAmori; 5 nyika yevaGebhari+ neRebhanoni yese nechekumabvazuva, kubvira kuBhaari-gadhi iri mujinga meGomo reHemoni kusvika kuRebhohamati;*+ 6 vagari vese vemunharaunda ine makomo kubva kuRebhanoni+ kusvika kuMisrefoti-maimu;+ nevaSidhoni+ vese. Ndichavadzinga* pamberi pevaIsraeri.+ Chaunofanira kungoita kuipa vaIsraeri kuti ive nhaka yavo, sezvandakakurayira.+ 7 Iye zvino unofanira kugova nyika iyi kuti ive nhaka yemadzinza 9 uye hafu yedzinza raManase.”+ 8 Imwe hafu yedzinza racho, pamwe chete nevaRubheni nevaGadhi vakatora nhaka yavo yavakapiwa naMozisi kumabvazuva kwaJodhani, sekupiwa kwavakanga vaitwa naMozisi muranda waJehovha:+ 9 kubva kuAroeri,+ iri pamucheto peBani reAnoni,*+ neguta riri pakati pebani racho, nenzvimbo yese yakakwirira uye yakati sandara yeMedhebha kusvika kuDhibhoni; 10 nemaguta ese aSihoni mambo wevaAmori, aitonga muHeshbhoni, kusvika kumuganhu wevaAmoni;+ 11 uyewo Giriyedhi nenharaunda yevaGeshuri nevaMaakati+ negomo rese reHemoni neBhashani+ yese kusvika kuSareka;+ 12 umambo hwese hwaOgi aiva muBhashani, uyo aitonga muAshtaroti nemuEdrei. (Aiva mumwe wevekupedzisira pavaRefaimu.)+ Mozisi akavakunda ndokuvadzinga.*+ 13 Asi vaIsraeri havana kudzinga+ vaGeshuri nevaMaakati, nekuti vaGeshuri nevaMaakati vachiri kugara pakati paIsraeri nanhasi. 14 Dzinza revaRevhi chete ndiro raasina kupa nhaka.+ Mipiro inopiswa nemoto kuna Jehovha Mwari waIsraeri ndiyo nhaka yavo,+ sezvaakavavimbisa.+ 15 Mozisi akabva apa dzinza revaRubheni nhaka maererano nemhuri dzavo, 16 uye nharaunda yavo yaibva kuAroeri, iri pamucheto peBani reAnoni,* neguta riri pakati pebani racho, nenzvimbo yese yakakwirira uye yakati sandara iri pedyo neMedhebha; 17 Heshbhoni nemaguta ayo madiki ese+ ari panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara, Dhibhoni, Bhamoti-bhaari, Bheti-bhaari-meyoni,+ 18 Jahazi,+ Kedhemoti,+ Mefaati,+ 19 Kiriyataimu, Sibma+ neZereti-shahari iri pagomo riri mubani, 20 Bheti-peori, nzvimbo dzine materu dzePisga,+ Bheti-jeshimoti,+ 21 maguta ese ari panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara, neumambo hwese hwaSihoni mambo wevaAmori, aitonga muHeshbhoni.+ Mozisi akakunda mambo wacho+ uyewo machinda eMidhiyani aiti Evhi, Rekemu, Zuri, Heri, naRebha,+ avo vaiva madzimambo aigara munyika yacho ari pasi paSihoni. 22 Bharami+ mwanakomana waBheori, uyo aifembera,+ aivawo pakati pevakaurayiwa nebakatwa nevaIsraeri. 23 Muganhu wevaRubheni waiva Rwizi rwaJodhani; uye nharaunda iyi ndiyo yaiva nhaka yevaRubheni maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yawo. 24 Mozisi akapawo dzinza raGadhi nhaka, maererano nemhuri dzavo, 25 uye nharaunda yavo yaisanganisira Jazeri+ nemaguta ese eGiriyedhi nehafu yenyika yevaAmoni+ kusvika kuAroeri, yakatarisana neRabha;+ 26 uye kubva kuHeshbhoni+ kusvika kuRamati-mizpe neBhetonimu, uye kubva kuMahanaimu+ kusvika kumuganhu weDhebhiri; 27 uye mubani, Bheti-haramu,+ Bheti-nimra, Sukoti,+ neZafoni, ihwo umambo hwese hwakanga hwasara hwaSihoni mambo weHeshbhoni,+ muganhu wacho uri Rwizi rwaJodhani kubva nechezasi kunoperera Gungwa reKinereti*+ riri kumabvazuva kwaJodhani. 28 Iyi ndiyo yaiva nhaka yevaGadhi maererano nemhuri dzavo, nemaguta acho nemisha yawo. 29 Mozisi akapawo hafu yedzinza raManase nhaka maererano nemhuri dzavo.+ 30 Nharaunda yavo yaibva kuMahanaimu,+ ichibatanidza Bhashani yese, umambo hwese hwaOgi mambo weBhashani, nemisha yese yematende yaJairi+ iri muBhashani, maguta 60. 31 Hafu yeGiriyedhi, uye Ashtaroti neEdrei,+ maguta eumambo hwaOgi ari muBhashani, akapiwa vanakomana vaMakiri+ mwanakomana waManase, kuti ave ehafu yevanakomana vaMakiri maererano nemhuri dzavo. 32 Idzi ndidzo nhaka dzavakapiwa naMozisi pavaiva murenje riri pedyo neMoabhi mhiri kwaJodhani, kumabvazuva kweJeriko.+ 33 Asi Mozisi haana kupa dzinza revaRevhi nhaka.+ Jehovha Mwari waIsraeri ndiye nhaka yavo, sezvaakavavimbisa.+
^ Kana kuti “kukundwa.”
^ Kana kuti “kubva kurwizi rwunobuda muna Nire.”
^ ChiHeb., “pakatarisana neIjipiti.”
^ Kana kuti “ndichavatorera nyika.”
^ Kana kuti “peRwizi rwaAnoni.”
^ Kana kuti “ndokuvatorera nyika.”
^ Kureva, Gungwa reGenesareti, kana kuti Gungwa reGarireya.